Wararka Maanta: Axad, Jan 2 , 2022-Banaanbaxyo waa weyn oo ka bilaawday magaalada Baledweyne
Wararka Maanta- Axad, Jan 2 , 2022
Banaanbaxyo waa weyn oo ka bilaawday magaalada Baledweyne
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Banaanbaxyo waa weyn oo looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle ayaa ka soconaya gudaha magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Banaanbaxa ayaa waxaa dhigaya boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid guud ahaan xaafadaha magaalada Baledweyne, kuwaas oo kasoo horjeeda weerar saaka ciidamada dowladda iyo kuwa Hirshabeelle ay ku qaadeen ciidamo uu hoggaaminaayo sarkaal lagu magacaabo Korneyl Nuur dheere.
Banaanbaxayaasha ayaa kala xiray guud ahaan isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha iyo ganacsiga magaalada Baledweyne, kuwaas oo dhagaxaan iyo geedo ku dhex daadiyay wadooyinka muhiimka ah ee soo gala kana baxa gudaha Baledweyne.
Dibadbaxayaasha ayaa ku qeylinaya erayo ay ka mid yihiin Hirshabeelle dooni meyno Cali Guudlaawe dooni meyno Dabageed dooni meyno Cali Jeyte dooni meyno iyo erayo kale oo ka dhan ah maamulka Hirshabeelle.
Ma ahan markii ugu horeysay oo banaanbaxyo noocaan oo kale ah oo looga soo horjeedo Hirshabeelle ay ka dhacaan gudaha magaalada Baledweyne, waxaa xusid mudan in shacabka reer Baledweyne gaar ahaan Beesha Xawaadle ay si weyn u diidan tahay jiritaanka maamulka Hirshabeelle tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa Cali Guudlaawe iyo Yuusuf Dabageed.
Ciidamada Badbaado Hiiraan iyo kuwa Golaha Kacdoonka Hiiraan oo Caawa gudaha u galay magaalada Baledweyne
1/2/2022 1:52 PM EST
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Wararka ka imaanaya magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Caawa gudaha u galeen magaalada Baledweyne ciidamada la baxay Badbaado Hiiraan ee uu hoggaamiyo Korneyl Nuur Dheere iyo ciidamada Golaha Kacdoonka Hiiraan ee uu hoggaamiyo Jenaraal Abuukar Xuud oo iskaashanaya.
Guddoomiyihii guddiga KMG doorashooyinka Puntland oo iscasilay
1/2/2022 6:59 AM EST
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Guddoomiyihii guddiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre ayaa shaaciyay inuu iska casilay xilkii isagoo sheegay inuu barlamaanka u gudbiyay warqad uu ku bannaynayo xilka uu hayay.
Afhayeenka Kulmiye "Farmaajo miyuu ogolaaday madaxbannaanida J. Somaliland?"
1/2/2022 6:56 AM EST
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Afhayeenka xisbiga Kulmiye Cabdinaasir Muxumed Xasan Buuni, oo ka jawaabay eedo uu guddoomiyaha xisbiga Waddani u jeediyay madaxweynaha Somaliland, ayaa sheegay in Xirsi uu ku ka cay sharci jabin.
Puntland oo baaq nabadeed kasoo saartay dagaal beeleed ka socda aagga Bocame
1/2/2022 6:43 AM EST
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Karaaash ayaa baaq nabadeed kasoo saaray dagaal u dhaxeeya labo maleyshiyo beeleed oo haatan ka socda deegaannada Saax meygaag iyo Sange jebiye oo dhaca inta u dhaxeeysa Garowe iyo Bocame.
Golaha Wakiilada Somaliland oo dib madaxweynaha ugu celiyay masuuliyiin uu magacaabay
1/2/2022 6:36 AM EST
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Golaha Wakiilada Somaliland, ayaa madaxweyne Biixi dib ugu celiyay 14 kamid ah 18 masuul oo uu magacaabay muddo saddex bilood iyo badh ka hor ah.
6 qof oo ku geeriyooday dagaal beeleed ka socda inta u dhexaysa Garowe iyo Boocame
1/2/2022 5:19 AM EST
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyooday 15 kalena way ku dhaawacmeen dagaal u dhaxeeya labo maleyshiyo beeleed oo ka socda deegaanno dhaca inta u dhaxaysa Garowe iyo Boocame.
Dagaal culus oo ka qarxay duuleedka magaalada Baledweyne
1/2/2022 3:45 AM EST
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Dagaal aad u xoogan ayaa lasoo warinaya inuu haatan ku dhexmaraayo deegaanka lagu magacaabo Qowlad oo ilaa 12-KM dhinaca Waqooyi bari uga beegan magaalada Baledweyne ciidamada dowlada Soomaaliya, kuwa maamulka Hirshabeelle oo dhinac ah iyo ciidamo ka amar qaata Korneyl Nuur Dheere oo ka mid ahaa saraakiishii ciidanka la baxay Badbaado Hiiraan.
Wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo joojisay xildhibaanno lagu kordhiyay golaha deegaanka Buuhoodle
1/2/2022 2:04 AM EST
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa joojisay dhaqangalka 6 Xubnood oo uu Duqa Degmada Buuhoodle u dhaariyey ka mid noqoshada Golaha Deegaanka Buuhoodle ee Gobolka Cayn.
Jubbaland oo dib u dajin u sameynaysa dadkii xoolahoodii ku waayay abaaraha
1/2/2022 1:40 AM EST
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Kadib abaartii darnayd ee haleeshay deegaannada hoos taga maamulka Jubbaland, ayaa haatan maamulku wuxuu sheegay inuu dib u dajin u sameynayo dadkii abaartaas ay saameysay ee ku xoolo beelay.
Taliska Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya oo sheegay iney howlgalo kusoo qabqabteen dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab
1/2/2022 1:18 AM EST
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Ciidamo ka tirsan Kumaandooska Gorgor oo howlgalo ka sameeyay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Sh/hoose ayaa sheegay iney gacanta kusoo dhigeen dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab.
Wasiirka amniga: Ma quseeyo go'aanka aan soo saaray ciiddanka NISA ee ku sugan baraha lagasoo galo garoonka Aadan Cadde
1/2/2022 12:54 AM EST
Axad, January, 2, 2022 (HOL) - Wasiirka amniga Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay go’aan uu shalay soo saaray oo la xiriiray isbedelka ciidamada NISA ee ka howlgala Garoonka Aadan Cadde, inuu quseeyo kaliya Ciidamada dharcadda ah ee ka hawlgala Gudaha Garoonka Diyaaradaha (Terminal ka).
Protests against HirsShabelle President Ali Gudlawe break out in Beletwyene -HOL
1/2/2022 9:43 AM EST
BELEDWEYNE (HOL) - Protests broke out Sunday in Beletwyene against Hirshabelle state president Ali Gudlawe and his deputy Yusuf Dabageed.
Puntland's elections chairman Guled Salah resigns -HOL
1/2/2022 9:23 AM EST
GAROWE (HOL) - The head of the Transitional Puntland Electoral Commission (TPEC) Guled Salah has resigned under unclear circumstances.
Somali Prime Minister Creates Committee to Look Into His Attempted Suspension - Reports -Sputnik
1/2/2022 12:20 AM EST
Somali Prime Minister Mohamed Hussein Roble has appointed a special committee to investigate his attempted suspension by President Mohamed Abdullahi Farmaajo, local media report.
U.S. cuts off Ethiopia, Mali, Guinea from Africa duty-free trade program -Reuters
1/2/2022 12:17 AM EST
The United States on Saturday cut Ethiopia, Mali and Guinea from access to a duty-free trade program, following through on President Joe Biden's threat to do so over alleged human rights violations and recent coups.